10 အကောင်းဆုံးကော်ဖီခုနှစ်တွင်ဥရောပများအတွက်အကောင်းဆုံးCafé | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 အကောင်းဆုံးကော်ဖီခုနှစ်တွင်ဥရောပများအတွက်အကောင်းဆုံးCafé
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 11/12/2020)
ဥရောပကော်ဖီတစ်ဦးဖတ်ရင်ဘာမှန်းမသိငွေပမာဏကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စားသုံး, ဒါကြောင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များနှင့်ကဖေးရှိပါတယ်. ဒါဟာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတစ်ကော်ဖီချစ်မြတ်နိုးတဲ့ရဲ့မက္ကာဖြစ်ပါတယ်, အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ပိုပြီးရုံထက်. ကဖေးယဉ်ကျေးမှုကမ္ဘာတွင်မယ့်ပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးကျနော်တို့သွားရောက်ကြည့်ရှုသည်ထက်ကော်ဖီဆိုင်များထွက်ရှာအံ့သောငှါ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြတိုက်, အထိမ်းအမှတ, ဘုရားကျောင်း, နှင့်အသင်းတော်များ! အဘယ်အရာကိုမယ်ဆိုတာပဲရစ်, ဗီယင်နာ, နှင့်အီတလီသူတို့ရဲ့ရှစ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဒုက္ခကဖေးယဉ်ကျေးမှုမရှိဘဲဖြစ်?
ဤတွင်များမှာ 10 အကောင်းဆုံးကော်ဖီခုနှစ်တွင်ဥရောပများအတွက်အကောင်းဆုံးCafé!
ကော်ဖီနှင့်ကဖေးကျွန်တော်တို့ကို connect. ကျနော်တို့ SIP နှင့်ကြိုင်, အတူထိတွေ့ဆက်ဆံ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒေသခံတွေ သို့မဟုတ်ချစ်ရသူ, နှင့်မျက်မှောက်ခေတ်ဘဝ၏လှုပ်လှုပ်ရွရွထံမှဝေး. ဒါဟာကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ elixir ဖြစ်ပါသည်.
ဥရောပတန်ဖိုးရှိသွားရောက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များရာနှင့်ချီရှိပါတယ်, ထိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သောအရာကိုတစ်ရွေးချယ်ရေးများမှာ 10 အကောင်းဆုံးကော်ဖီခုနှစ်တွင်ဥရောပများအတွက်အကောင်းဆုံးCafé:
1. ဘာစီလိုနာ: စာတနျကကော်ဖီထောင့်
ဤသည်ကော်ဖီဆိုင် hipster အတွက်တင်ပါးကိုထည့်လေ့မရှိ. ဒါဟာကပိုင်ဆိုင်သည် 25 ကော်ဖီ bean ကိုနှင့်အတူမေတ္တာ၌သူသည်အဟောင်းကိုတစ်နှစ်. သူကစေ့စပ်သည်သူ၏ Blend ပြိုးနပွေီ၏အနုပညာကျွမ်းကျင်ထားပြီး. သူတို့ကဒါလက်ရှိရောစပ်သောအရာကိုသူ့ကိုမေးရန်သေချာစေပါရာသီနှင့်အတူပြောင်းလဲသွား.
ဤအသူတော်ကောင်းတရားစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ကိုဖြည့်ဖို့, အိမ်လုပ်မုန်အမျိုးမျိုးဝယ်ယူဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်. တစ်ကုလားထိုင်တက် Pull, အလင်း၌တစ်စီးပါစေသောပြတင်းပေါက်ကိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အားဖြင့်လောကဓာတ်သွားလာရင်းစောင့်ကြည့်. ဒါဟာကျိန်းသေဥရောပအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များတစျဦးဖွစျသညျ.
2. ဇူးရစ်: ကဖီး Odeon
Art Deco ဇူးရစ်မြို့ရှိကဖေး Odeon ၏အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စတိုင်ဖြစ်ပါတယ်. ဤသည် bohemian ဂန္အတွက်၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ် 1910 နှင့်စာရေးဆရာများ၏စားကျက်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ကျော်ကြား, ကဗျာဆရာတွေ, ဂီတသမား, နှင့်ပညာတတ်. အကျော်ကြားဆုံးဧည့်သည်၏အချို့တို့ပါဝင်သည် အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း နှင့်ပီကာဆို.
ဤသည်မြင့်မားသောမျက်နှာကျက်နှင့်အတူအဟောင်းကျောင်းကိုဥရောပကြော့ရှင်းဖြစ်ပါသည်, Brasserie fittings, ထင်ဟပ်နံရံများ, နှင့်တရားဝင်စားပွဲထိုးစားပွဲထိုး.
3. ပဲရစ်: အို Coffeeshop
ပဲရစ်မှာတစ်ဦးကလှိုင်း-မှုတ်သွင်းကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုစတေးလျနှင့် Frenchie ကော်ဖီဆိုင် start အခါသင်ရကားအဘယ်သို့, ကမ်ဘာပျေါမှာအကျော်ကြားဆုံးကဖေးယဉ်ကျေးမှုအစွဲအလမ်းမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းအတွက်. ဒါဟာဥရောပမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များများ၏စာရင်းပေါ်မှာမြင့်မားစေသည်.
အို Coffeeshop noisettes အပါအဝင်အချို့သောအကြိုက်ဆုံးနှင့်အတူစိတ်ပျက်ပါဘူး, ဦးထုပ်များ, နှင့်အဖြူရောင်လူဖြူ. ကြက်ဥဘင်နီဒစ်တစ် showstopper ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အမိန့်မှသေချာအောင်!
4. ဗီယင်နာ: ကဖီး Schwarzenberg က
ဗီယင်နာသူဌေးကော်ဖီယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းရှိပါတယ်; နိုင်ငံရေးစုရုံးခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းကလူ, ဘာသာ, နှင့်သိပ္ပံ. နက်ရှိုင်းသောဒဿနစကားပြောဆိုမှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဘီယာအရက်ချက်ရင်းစာရေးဆရာများနှင့်တွေးခေါ်ရှင်. အများကြီးယနေ့ဟောင်းလက်ထက် မှစ. ပြောင်းလဲပါကဥရောပ၌အကြှနျုပျတို့၏အကွိုကျဆုံးအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များတဦးဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်.
ကဖီး Schwarzenberg ကဗီယင်နာအတွက်စံပြကော်ဖီဆိုင်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစဉ်အလာဖြစ်ပါတယ်, ဟန်ကြီးပန်ကြီးလုပ်သော, သင်၏နောက်လာမည့်အဘို့အperfectlyုံ photogenic အကြီးအ Instagram ကိုရုပျပုံ, #ကော်ဖီ.
5. ဘရပ်ဆဲလ်: ခွက်
ထိုကဲ့သို့သော Mok အဖြစ်တည်ထောင်ရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ဘရပ်ဆဲလ်ဥရောပမြေပုံကိုအတွက်အကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များအပေါ်အစက်အပြောက်ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်.
Mok မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်အစားအစာအားလုံးဖြစ်ပါတယ် သက်သတ်လွတ်ဟင်းလျာများ, သင်တစ်ဦးအရသာပြားချပ်ချပ်အဖြူကိုမသောက်နေစဉ်, သငျသညျအခွံမာသီးနှင့်အတူချိုမြိန်ဂျုံယာဂုသို့ tuck နိုင်ပါတယ်, ဂရိတ်ဖရု, သလဲသီး, နှင့်သက်သတ်လွတ်ဒိန်ချဉ်.
6. အီတလီ: Milano Roastery
အီတလီနိုင်ငံရှိ Starbucks? ဒါဟာသေးမှားယွင်းတဲ့ခံစားရနှင့်, ဒါမှန်သည်. အိတ္စပရပ္မီလန်ကမ္ဘာကြီးကို ပေး. Milano Roastery ကြောင့်အကြံပိုင်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုးကွယ်ချေသောဆုကြေးဇူးဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာဟုအမည်ပေးထားသည့်ထားပြီး ကော်ဖီ၏ပြဇာတ်ရုံ. ဒါဟာကျိန်းသေဥရောပစာရင်းထဲတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များပေါ်တွင်နေရာတစ်နေရာရှိပါတယ်. ဤသည်အာကာသကော်ဖီအစဉ်အလာတစ်ခုအခမ်းအနားသည်နှင့်တစ်ပြည်နယ်နှင့်အတူတစ်အရသာအခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ် အနုပညာ Roastery. ဝီလီ Wonka ကော်ဖီနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်းစားပါ.
7. လစ္စဘွန်း: ကိုပင်ဟေဂင်ကော်ဖီ Lab က
အဆိုပါကိုပင်ဟေဂင်ကော်ဖီ Lab မှသေးငယ်တဲ့ကွင်းဆက်များနှင့်ကော်ဖီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့လှိုင်းတံပိုးအောင်ကြောင်းစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစာရှောင်ဥရောပအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များတဦးဖြစ်လာနေပါသည်. အဆိုပါကိုပင်ဟေဂင်ကော်ဖီ Lab မှတတိယလှိုင်းကော်ဖီယဉ်ကျေးမှု၌အခိုငျအမာယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ခြားနားချက်ကိုရှင်းလင်းစွာတစ်မှုပညာရှငျနှငျ့သို့မဟုတ်ယာဉ်အဖျော်ယမကာအဖြစ်ကော်ဖီတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်သောဤနည်းလမ်းများ.
8. လန်ဒန်: Kaffeine
Kaffeine ၏ပိုင်ရှင်များသြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်ခရီးနှင့်သူတို့လန်ဒန်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်နိုင်မယ့်ကော်ဖီဆိုင်အဘို့မိမိတို့လှုံ့ဆော်မှုကိုတွေ့. သူတို့ရဲ့အိပ်မက်သဘောပေါက်ကြပြီးဥရောပမှာအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များတဦးဖွင့်လှစ်ခဲ့.
ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံးကော်ဖီဆိုင်များနှင့်ဝသကဲ့သို့, အစားအစာအတွေ့အကြုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Kaffeine မျှချွင်းချက်ဖြစ်ပါသည်. သုပ်, အသားညှပ်ပေါင်, မီးဖိုထဲကပူနေတဲ့အရာတစ်ခုကမီနူးပေါ်မှာပါ.
9. Edinburgh: ဘီယာအရက်ချက် Lab က
Edinburgh အတွက်, အဆိုပါစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည် Lab မှလမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်သည်နှင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များတစျဦးဖွစျသညျ.
ကလူကိုပိုပြီးအဘို့မိမိတို့တံခါးများအပေါ်ကန်ပြီးမူကြောင်းကိုဘီယာအရက်ချက် Labs ကထူးခြားမှု. သူတို့ရဲ့ကော်ဖီ menu ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှတစ်ဦးသေတမ်းစာပင်ဖြစ်သည်.
ဒါဟာလေးခုလှည့်တစ်ခုတည်းမူရင်းကော်ဖီ features. နှစ်ဦးက၎င်းတို့၏ဘီယာအရက်ချက်ဘားတန်းနှင့်၎င်းတို့၏အိတ္စပရပ္ bar ပေါ်တွင်အခြားနှစ်ခုအပေါ်ပြသနာတွေပြီ. ကော်ဖီအားလုံးအတွက်အရသာနှင့်အတူ ကိတ်မုန့်သို့မဟုတ် pastries, သောစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည် Lab မှမရှိရှားပါးမှုရှိပါတယ်.
10. ပရာ့ဂ်: ရောထွေး
မော်ဒန်, တောက်ပ, နှင့် vivacious, Misto တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်.
နာမတျောအခကျြအဘို့ဖြစ်၏, နေရာ. သူတို့ရဲ့အထူးကြွယ်ဝသောကော်ဖီအချိုရည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အရသာအစားအစာ.
အဘယ်သူမျှမအချိန်ကိုအရေး, နံနက်စာ, နေ့လည်စာ, ဒါမှမဟုတ်ညစာစား, Misto စစ်မှန်တဲ့စတိုင်၌သင်တို့ကိုကြိုဆိုပါတယ်နှင့်သေချာသင်သည်သင်၏ဖိန်းပြင်ဆင်ချက်ရစေမည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးခံစား “10 အကောင်းဆုံးကော်ဖီခုနှစ်တွင်ဥရောပများအတွက်အကောင်းဆုံးCafé”? အတူစာအုပ် တစ်ဦးကရထား Save နှင့်သင့်ကော်ဖီကဖီးယဉ်ကျေးမှုခရီးစတင်ပါ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 အကောင်းဆုံးကော်ဖီခုနှစ်တွင်ဥရောပများအတွက်အကောင်းဆုံးCafé” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cafes-europe%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, သင် / pl မှ / fr သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ကဖီး ကဖေး ကော်ဖီ ခရီးသွားခြင်း TravelLondon မီလန် travelparis TravelVienna ဇူးရစ်